Tools उपकरणहरू अनलाइन र तपाईंको मोबाइलमा अवधारणा नक्शा सिर्जना गर्न क्रिएटिव अनलाइन
Tools उपकरणहरू अनलाइन र तपाईंको मोबाइलमा अवधारणा नक्शा सिर्जना गर्न
लोला करील | | डिजाइन उपकरणहरू, पुनरावृत्त
अवधारणा नक्शा डाटा दृश्यका लागि उपयोगी उपकरण हो, अवधारणाहरू याद राख्नुहोस्, सिक्नुहोस् र विचारहरू उत्पन्न गर्नुहोस्। जे होस् तिनीहरूलाई पेन्सिल र कागजले हातैले गर्नु सँधै एक विकल्प हुनेछ, टेक्नोलोजी हामीलाई असीम संभावनाहरु प्रदान गर्दछ किन उनीहरूको फाइदा लिने छैन? यस पोष्टमा मैले concept वटा नि: शुल्क उपकरणहरू संकलन गरेको छु कि अवधारणा नक्शा अनलाइन र तपाईंको मोबाइल फोनबाट सिर्जना गर्न। प्रत्येक एक का यसको फाइदा हुन्छ र तपाईले मूल्या assess्कन गर्नु पर्छ कि कुन एकले तपाईको आवश्यकतालाई सबै भन्दा राम्रो गर्दछ। यो पोष्ट पढिरहनुहोस् र तपाइँको लागि उत्तम प्लेटफर्म फेला पार्नुहोस् तपाईं आफ्नो विश्लेषणात्मक कौशललाई अर्को तहमा लैजान सक्षम हुनुहुनेछ!
3 सिम्पल माइन्ड +
5 बुद्धिमानी नक्शा
लुक्किचार्ट एक छ तपाईको दिमाग नक्शा अनलाइन बनाउनको लागि उत्कृष्ट कार्यक्रम, यस वेब-अनुप्रयोगले तपाईंलाई चित्र र ग्राफहरू संयोजन गर्न उत्कृष्ट सारांशहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ जुन पक्कै तपाईंलाई अवधारणा अझ राम्ररी सम्झन मद्दत गर्दछ।तिनीहरूलाई सिर्जना गर्न धेरै सरल छ, तपाईं केवल बाकस तान्न र ड्रप गर्न हुनेछ जसमा पाठ जान्छ र तिनिहरु पछि भरिनेछन्। यो वास्तवमै छिटो हो। तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चाहानु हुने सबै विवरणहरू प्रविष्ट गर्नुहोस्, यसलाई रंग दिनुहोस् वा छविहरू घुसाउनुहोस्।
अनुप्रयोगको एक लाभ यो हो कि यसले तपाईंलाई फाइलहरूलाई .txt ढाँचामा आयात गर्न अनुमति दिन्छ र यसमा स collected्कलन गरिएको डाटासँग स्वचालित रूपमा दिमाग नक्शा सिर्जना गर्दछ। एकचोटि तयार भएपछि, तपाईले यसलाई मनपर्ने ढाँचामा निर्यात गर्न सक्नुहुन्छ (PDF, JPEG र PNG)।
सनकी यो एक छ सुपर बहुमुखी वेब अनुप्रयोग। केवल यसले तपाईंलाई दिमागी नक्शा सिर्जना गर्न अनुमति दिनेछ, महत्त्वपूर्ण डाटा र अनुप्रयोग र वेब डिजाइन मकअपहरू सम्झनको लागि तपाईं स्टिकी नोटसहित फ्लोचार्ट, व्हाइटबोर्डहरू पनि सिर्जना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। के यो अविश्वसनीय छैन?
मेरो लागि यस अनुप्रयोगको बारेमा सबै भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि यो धेरै सहज र प्रयोग गर्न सजिलो छ। तसर्थ, जब यो एक रूपरेखा बनाउन को लागी आउँछ, तपाईं बक्स र एर्रो राख्नको लागि समय बर्बाद गर्नुहुन्न, अनुप्रयोगले प्राय: स्वचालित रूपमा यो गर्दछ।
सिम्पल माइन्ड +
सिम्पल माइन्ड + es एक नि: शुल्क अनुप्रयोग विशेष गरी दिमागमा नक्सा निर्माण गर्न डिजाइन गरिएको हो जसले सिकाई सहयोग गर्दछ। यो विन्डोज र म्याकको लागि र आईओएस र एन्ड्रोइड ट्याब्लेटहरू वा मोबाइल उपकरणहरूको लागि उपलब्ध छ। एउटा फाइदा भनेको त्यो हो तपाइँलाई एक पृष्ठमा बहु नक्शा सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ, केहि आवश्यक कुरा जुन तपाईंले खोजिरहनु भएको हुनु भनेको तपाईंको सबै विचारहरू एकल नजरमा हेर्न सक्षम हुनु हो।
सिम्पल माइन्ड + सँग पनि तपाईं आफ्नो स्किमामा छविहरू थप्न सक्नुहुनेछ। फोन र ट्याब्लेटमा यसले तपाईंलाई भिडियोहरू र भ्वाईस नोटहरू थप्न क्षमता दिन्छ।
MindMister यो एक छ आरेखहरू सिर्जना गर्न धेरै पूर्ण अनुप्रयोग, यो पनि अनुमति दिन्छ धेरै सौंदर्य डिजाइन डिजाइन, रंग प्यालेट र विभिन्न पाठ बाकस ढाँचाहरूको एक विस्तृत श्रृंखला को प्रस्ताव। थप रूपमा, तपाई बक्सहरूमा अतिरिक्त नोट र टिप्पणीहरू थप्न सक्नुहुनेछ, यि मुख्य डिजाइनमा देखिदैन, तिनीहरू केवल जब तपाईं तिनीहरूलाई क्लिक गर्नुहुन्छ देखा पर्दछ।
यो पनि एक प्रदान गर्दछ प्रतीक को महान विविधता यसले तपाईंलाई विचारहरू सुदृढीकरण गर्न मद्दत गर्दछl! केवल नकारात्मक पक्ष भनेको यो हो कि निःशुल्क संस्करणको साथ तपाईं केवल तीन नक्शा बनाउन सक्नुहुन्छ यद्यपि यो सत्य हो कि असीमित मानसिक नक्शा समावेश गर्ने "व्यक्तिगत" सदस्यता एकदम सस्तो छ (month.4.99 XNUMX प्रति महिना यूरो),
बुद्धिमानी नक्शा es मेरो मनपर्ने मध्ये एक, धेरै छ प्रयोग गर्न सजिलो र यो कुनै निषेध बिना, पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छ। धेरै हुनुको अलावा रूपरेखा बनाउनका लागि उपयोगी व्यक्तिगत रूपमा, यसले तपाईंलाई अरू कसैसँग पनि सँगै काम गर्नको लागि साझेदारी गर्न विकल्प दिन्छ। तपाईं दुबै सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ!
अर्को सकारात्मक कुरा यो हो यस अनुप्रयोगले वेबमा नक्सा घुसाउन नक्सालाई अनुमति दिन्छ र लिंक मार्फत ब्लग। स्पष्ट रूपमा, यदि यो केहि व्यक्तिगत हो र तपाइँ यसलाई कहिँ पनि प्रकाशित गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाइँ यसलाई SVG, PNG र JPG ढाँचामा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
क्यानभा लगभग सबै चीजको लागि काम गर्ने एक अनुप्रयोग हो। यसले तपाईंको डिस्पोजल टेम्प्लेटहरू राख्दछ जुन तपाईंको आवश्यकताहरू अनुकूल गर्दछ, र यदि तपाईंलाई के आवश्यक छ भने एउटा सिर्जना गर्नुहोस् अवधारणा नक्शा वा एक आकर्षक डिजाइनको साथ एक इन्फोग्राफिक, तपाईं सहि ठाउँमा हुनुहुन्छ।
तपाईं सक्नुहुन्छ टेम्प्लेट वा स्क्र्याचबाट काम गर्नुहोस्यदि तपाइँ अनुकूलन आकारको साथ खाली कागजात सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ र आफैं डिजाईनको ख्याल राख्नुहुन्छ। क्यान्भा को ठूलो फाइदा यो हो अनुप्रयोग भित्र तपाईं छवि र चित्र को एक विस्तृत पुस्तकालय पाउनुहुनेछ, ताकि तपाईं प्लेटफर्म छोडेर सबै स्रोतहरू थप्न सक्नुहुन्छ।
क्यान्भा पनि प्रदान गर्दछ लि through्क मार्फत सहकार्य गरेर काम गर्ने सम्भावना र यो कम्प्युटर, ट्याबलेट र आईओएस र एन्ड्रोइड मोबाइल उपकरणहरूसँग उपयुक्त छ।
यो एक अद्भुत अनुप्रयोग हो लागि दिमागमा नक्सा सिर्जना गर्नुहोस् जसले सिक्ने सुविधा प्रदान गर्दछ र विचारहरूको जेनेरेसनको प्ले स्टोर (4,7 /)) मा एकदम राम्रो ग्रेड छ र अधिकतर सकारात्मक समीक्षा। यो विन्डोज, म्याक र लिनक्स र आईओएस र एन्ड्रोइड मोबाइल उपकरणहरूको साथ उपयुक्त छ।
मिन्डोमो es प्रयोग गर्न धेरै सजिलो र यदि तपाईंलाई आवश्यक परेमा यो संकेत गरिएको विकल्प हो सजीलो योजनाबद्ध योजना बनाउनुहोस्। पर्दामा दिमाग मानचित्र पिन गरेर, तपाईं एक प्रकारको सिर्जना गर्नुहुनेछ नेत्रहीन अपील प्रस्तुति र अरूहरूसँग साझेदारी गर्न तयार छ। साथै, को रूप मा क्लाउडमा सबै बचत हुन्छ, तपाईंसँग सँधै तपाईंको अवधारणा नक्शा हातमा हुनेछ जब तपाईं तिनीहरूलाई आवश्यक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » डिजाइन उपकरणहरू » Tools उपकरणहरू अनलाइन र तपाईंको मोबाइलमा अवधारणा नक्शा सिर्जना गर्न
एक पुस्तक को भागहरु
अवधारणा कला के हो